Inona ny fironana amin'ny vidin'ny akora indostrialy amin'ny 2021?
Ny fiakarana dia manasongadina toetra telo voakasiky ny valanaretina tamin'ny 2020, hatramin'ny tapany faharoa tamin'ny taona, ny akora indostrialy sy ny mpanampy indostrialy dia nampiseho fironana miakatra amin'ny ankapobeny, ary ny vidin'ny vokatra isan-karazany dia nahatratra hatrany hatrany hatrany. Tamin'ny taona 2021, raha ny voalazan'ny ...
Ny fitsipiky ny fiasan'ny thermometer elektronika
Ny thermometre thermoelectric dia mampiasa thermocouple ho toy ny singa fandrefesana mari-pana handrefesana ny hery thermoelectromotive mifandraika amin'ny mari-pana ary ny sanda mari-pana dia aseho amin'ny metatra. Ampiasaina betsaka izy io handrefesana ny mari-pana amin'ny -200 ℃ ~ 1300 ℃, ary ny ...
Fiheverana mahazatra ny fitahirizana mangatsiaka sy ny fomba fisafidianana
Ny fahatsapana ny fitahirizana mangatsiaka sy ny fomba fisafidianana miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny harinkaren'ny fireneko, niditra tao amin'ny sehatr'asa maro toy ny fivarotana lehibe, varotra, fambolena ary indostrialy ny fitaovana fampangatsiahana, ary mifandray akaiky amin'ny fiainantsika. Noho ny fivoaran'ny haingana ny refy ...
Famoahana vokatra vaovao
Mora miasa ny boaty fanaraha-maso elektrika vaovao novokarin'ny orinasanay, mora ny vidiny, ary lalina ny fifalian'ny mpanjifa. Ireto ny andinindininy: Ny mpanara-maso ity dia ezahina hifehezana ny hafanan'ny fitahirizana mangatsiaka antonony sy ambany. Manana hafanana amiko ...
Fampidirana jiro fitahirizana mangatsiaka
Ny jiro fitehirizana mangatsiaka dia karazana jiro antsoina amin'ny endrika fampiasana jiro. Ampiasaina amin'ny fitehirizana mangatsiaka, fitehirizana mangatsiaka, vata fampangatsiahana ary toerana hafa izay misy ny maripana manodidina azy somary ambany, somary mando, ary ilaina ny fiarovana ny herinaratra sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Miaraka amin'ny developm ...
Inona no atao hoe Controller ny mari-pana ary ahoana ny fomba fiasany?
Inona no atao hoe Controller ny mari-pana ary ahoana ny fomba fiasany? F: Inona no atao hoe Controller ny mari-pana ary ahoana ny fomba fiasany? A: Ny mpanara-maso ny mari-pana dia fitaovana ampiasaina hifehezana ny mari-pana. Manao izany amin'ny fandrefesana aloha ny mari-pana (miovaova ny dingana), avy eo mampitaha azy amin'ny val irina ...
Fitsipika momba ny fifehezana termostat elektronika
Ny fampandrosoana haingana ny siansa sy ny haitao dia tsy isalasalana fa nitondra fampiononana betsaka tamin'ny fiainantsika. Ny famoronana sy ny fampivoarana ny fitaovana mekanika maro dia ho an'ny fahaveloman'ny zanak'olombelona. Ankehitriny dia hanazava aminao fitaovana iray antsoina hoe mpanara-maso ny mari-pana aho. Araka ny anarany, t ...
Ny toe-java-misy sy ny firoboroboan'ny indostrian'ny fampangatsiahana sy ny fampangatsiahana
Ilay antsoina hoe "frizidera" dia ny fampiasana fomba iray hanamboarana akora na habaka maripana ambany kokoa noho ny tontolo manodidina azy ao anatin'ny fe-potoana iray, ary mandritra izany fotoana izany dia azo tazomina ao anaty mari-pana voafaritra range. Ity dia t ...
Fa maninona no tsy misy tahiry intsony ny puce global? Misy lafin-javatra telo lehibe ao ambadik'izany, sendra miaraka daholo
Hatramin'ny telovolana fahaefatra taona 2020, tsy misy tahiry intsony ny chips, ary tamin'ny 2021 dia nanjary matotra kokoa izy io. Tsy ny sombin'ny fiara ihany no tsy manana tahiry, fa ny chip rehetra dia nanomboka tsy manana tahiry intsony, ary ny indostrian'ny semikonduktor iray manontolo dia voadona. Raha ny marina, hatramin'ny namoronana ny puce, ny en ...
Nifarana tamim-pahombiazana tao Shanghai ny fampirantiana fampangatsiahana sinoa faha-32
Niara-notohanan'ny filan-kevitr'i Sina ho fampiroboroboana ny varotra iraisam-pirenen'i Beijing sampana, Fikambanan'ny Refrigeration China, Fikambanan'ny Refrigeration sy ny indostrian'ny rivotra iainana, ny Shanghai Refrigeration Society ary ny Shanghai Refrigeration and Air-Conditioning Association Association, ny 32nd Internat ...
thermometer nomerika Aquarium, fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny hafanana, fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy, fanaraha-maso ny mari-pana incubator, thermometer nomerika, nomerika nomerika mpanara-maso,